शिल्पा र छविको झगडा टुंगियो ! छविले माफी मागेपछि दुवैबीच सहमति
Homeसमाचारशिल्पा र छविको झगडा टुंगियो ! छविले माफी मागेपछि दुवैबीच सहमति
July 11, 2019 Spnews समाचार Comments Off on शिल्पा र छविको झगडा टुंगियो ! छविले माफी मागेपछि दुवैबीच सहमति
नायिका शिल्पा पोखरेलले निर्माता तथा श्रीमान चावी ओझाबाट आफू असुरक्षित बनेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएकी थिइन्। आफूलाई हातपात गरेको र कानको जालीसमेत फुटेको दावी शिल्पाको थियो। यस विषयमा छलफल गर्न प्रहरीले मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । अन्तत : नायिका शिल्पा पोखरेलले श्रीमान् छवी ओझाविरूद्ध प्रहरीमा दिएको उजुरी छलफलबाट टुंगिएको छ।
छवि ओझाले पत्नी शिल्पा पोखरलमाथि घरेलु हिंसा गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै शिल्पासंग सामान्य झगडा मात्र भएको तर कुटपिट नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफू प्रहरी परिसर पुगे पनि शिल्पा नआएकाले हिजो छलफल हुन नसकेको छविले बताएका छन्।छविको भनाइ अनुसार गत ८ असारमा दिउँसोको खाना खाएपछि उनीहरुबीच घरायसी विषयमा झगडा भएको र त्यसपछि एकाएक शिल्पा स्कुटर लिएर घरबाट निस्किएको उनले बताएका छन्। ‘दिउँसो उनी स्कुटर लिएर निस्किइन् । बेलुका पाँच बजे विकास रौनियार (शिल्पाको बनाएको दाइ) र सम्झना उप्रेती रौनियार (विकासकी पत्नी) आए र उनको लुगाफाटो लिएर गए,’ छविले भने ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुमा भएको दुवै पक्षको छलफलपछि पोखरेल र ओझाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि पाखरेलले श्रीमानबाट असुरक्षित भएको भन्दै शान्ति सुरक्षा माग गरेर उजुरी दिएकी थिइन् । परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार पोखरेलको सुरक्षामा आँच नपुग्याउने गरी ओझाले लिखित सम्झौता गरेका छन् । त्यसक्रममा ओझाले शिल्पासँग माफी पनि मागेका छन्। डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार दुवैबीच सहमति भई प्रहरीमा परेको उजुरी टुंगिएको हो।
नायिका शिल्पा पोखरेल निर्माता छविराज ओझाको चौथो श्रीमती बनेर ओझा निवास भित्रिएकी थिइन् । शिल्पा र छविराजले २०७३ सालको दशैंमा गोप्य रुपमा बिहे गरेका थिए । लामो समय उनीहरुले आफ्नो बिबाहलाई लुकाएका थिए। तर, गत वर्ष निर्माता ओझाले आफूहरुले विवाह गरिसकेको स्वीकारेका थिए । म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेकी शिल्पालाई छविराजले चलचित्र ‘लज्जा’ मार्फत् डेब्यू गराएका थिए।यस बाहेक शिल्पाले छविले निर्माण गरेका धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्।
पोखरेलले छवीसँग डिभोर्सको माग राखेको बताइए पनि छलफलमा त्यस विषयले प्रवेश नपाएको थाहा हुन आएको छ। त्यो विषय उजुरीमा नभएको र व्यक्तिगत कुरा भएकाले प्रहरीकहाँ छलफल नभएको बताइएको छ । दुवै जनाबीच सहमति भए पनि शिल्पा छविसँग पहिलेझैँ सँगै बस्छिन्/बस्दिनन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन ।
छबीले कानको जाली फुटायो भन्दै सिल्पा पुगिन चौकी, छविले डिभोर्स नदिने(हेर्नुस भिडियो)
भगवान शिबको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !